“परीक्षाको बेला” बाइबल विद्यार्थीहरू दृढ रहे | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओरोमो कम्बोडियन काजाक किकुयु किन्यारवान्डा किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मले मालागासी माल्टिज म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
सन्‌ १९१४ मा सुरु भएको प्रथम विश्वयुद्धमा बाइबल विद्यार्थीहरूले भाग लिएनन्‌। उनीहरूको यस्तो अडानले संसारका मानिसहरूको ध्यान खिच्यो। (यशै. २:२-४; यूह. १८:३६; एफि. ६:१२) बेलायतमा रहेका परमेश्वरका सेवकहरूले त्यस्तो परिस्थितिको सामना कसरी गरे?
बेलायतको सैन्य सेवा ऐन, १९१६ ले १८ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका अविवाहित पुरुषहरूले अनिवार्य सैन्य सेवा गर्नुपर्ने नियम जारी गऱ्यो। उक्त ऐनले विशुद्ध “धार्मिक वा नैतिक अडानको” कारण सैन्य सेवा गर्न इन्कार गर्नेहरूलाई भने छुट दियो। क-कसलाई छुट दिने र कुन हदसम्म छुट दिने भन्ने कुराको निर्धारण गर्न सरकारले विशेष अदालतहरू पनि स्थापना गऱ्यो।
केही समयभित्रै लगभग ४० जना बाइबल विद्यार्थीलाई सैनिक झ्यालखानामा हालियो अनि आठ जनालाई युद्धमा भाग लिन फ्रान्स पठाइयो। यस्तो अन्यायी व्यवहारको भर्त्सना गर्दै बेलायतका भाइहरूले प्रधानमन्त्री हर्बर्ट एसक्विथलाई ५,५०० हस्ताक्षरसहितको एउटा पत्र पठाए।
फ्रान्समा पठाइएका ती आठ जना भाइले युद्धमा भाग लिन इन्कार गरेकोले तिनीहरूलाई गोली हान्ने निर्णय गरिएको खबर प्राप्त भयो। गोली हान्न तिनीहरूलाई लाइन लगाएर उभ्याइयो। तर त्यति नै बेला तिनीहरूको सजाय कम गरियो र तिनीहरूलाई दस वर्षको कैद सजाय सुनाइयो। यसको लागि तिनीहरूलाई पुनः इङ्गल्यान्ड फर्काइयो।
जेम्स फ्रेडरिक स्कट
युद्ध चर्कंदै जाँदा विवाहित पुरुषहरूलाई पनि अनिवार्य सैन्य सेवामा भाग लिन बाध्य पारियो। इङ्गल्यान्डको म्यान्चेस्टरमा हेन्री हड्सनविरुद्ध मुद्दा हालिएको थियो। तिनी डाक्टर तथा बाइबल विद्यार्थी थिए। अगस्त ३, १९१६ मा अदालतले तिनलाई दोषी साबित गऱ्यो, जरिबाना तिरायो अनि सेनाकहाँ सुम्पिदियो। त्यसै समयमा स्कटल्याण्डको इडिनबर्गमा अर्को मुद्दाको फैसला गरियो। पच्चीस वर्षीय कल्पोर्टर (अहिले अग्रगामी भनिन्छ) जेम्स फ्रेडरिक स्कटलाई निर्दोष साबित गरियो। सरकारले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गऱ्यो। तर लन्डनको अर्को मुद्दामा ध्यान दिनु उचित ठानेर त्यस मुद्दालाई थाती राख्यो। त्यस मुद्दामा हर्बर्ट किप्स नाम गरेका भाइलाई दोषी ठहर गरियो, जरिबाना तिराइयो अनि सेनाकहाँ सुम्पिइयो।
सेप्टेम्बर १९१६ सम्ममा २६४ जना भाइहरूले सैन्य सेवाबाट छुट पाउन आवेदन दिएका थिए। तिनीहरूमध्ये ५ जनालाई सैन्य सेवाबाट छुट दिइयो, १५४ जनालाई सडक निर्माणमा अनि खानीमा काम गर्न खटाइयो, २३ जनालाई युद्ध गर्नु नपर्ने सैन्य सेवामा खटाइयो, ८२ जनालाई सेनाकहाँ सुम्पिइयो अनि कतिपयलाई चाहिं अदालतमा मुद्दा चलाएर झ्यालखानामा हालियो। तिनीहरूलाई क्रूर व्यवहार गरिएकोमा जनसाधारणले विरोध गरे। त्यसैले सरकारले तिनीहरूलाई सैनिक झ्यालखानाबाट श्रम शिविरमा पठायो।
एड्गार क्ले र प्राइस ह्युजलाई वेल्स भन्ने ठाउँमा बाँध बनाउने काममा लगाइयो। पछि तिनीहरूले बेलायत शाखा कार्यालयमा निरीक्षकको रूपमा सेवा गरे। अनि फ्रान्सबाट फर्केका आठ जनामध्ये एक हर्बर्ट सिनियरलाई योर्कशायरस्थित वेकफिल्ड झ्यालखानामा पठाइयो। अरूलाई भने डार्टमोर झ्यालखानामा कठोर श्रम सजाय दिइयो। त्यस झ्यालखानामा धार्मिक अडानको कारण कैद गरिएका भाइहरूको सबैभन्दा ठूलो समूह नै बन्यो।
युद्ध गर्नु नपर्ने सैन्य सेवा गर्न राजी भएका बाइबल विद्यार्थी फ्रान्क प्ल्याटलाई युद्धमा भाग लिन इन्कार गरेकोले लामो समयसम्म चरम यातना दिइयो। सेनामा भर्ती भएको केही समयपछि नै सत्य सिकेका आट्कीन्सन पाजेटलाई पनि युद्धमा भाग लिन इन्कार गरेकोले सैन्य अधिकारीहरूले क्रूर यातना दिए।
त्यतिबेलाका हाम्रा भाइहरूले तटस्थ रहनुको अर्थ राम्ररी बुझेका थिएनन्‌। तैपनि तिनीहरूले यहोवा परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन खोजे। माथि उल्लिखित भाइहरूले भीषण “परीक्षाको बेला” तटस्थ रहेर राम्रो उदाहरण बसाले। (प्रका. ३:१०)—बेलायतको हाम्रो अभिलेखालयबाट
के तिनीहरू राष्ट्रको सुरक्षाको लागि खतरा हुन्‌?
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण मे २०१३